General Manager | Job in Myanmar ﻿
13.12.2018, Full time , Manufacturing
Company: Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co., Ltd.
Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co., Ltd.
•	MD အားတာဝန်ခံပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊
•	ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံမှုပြုခြင်း၊ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာမူဝါဒများအား အတည်ပြုပေးရန်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာအထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုများဆောင်ရွက်ရန်၊
•	General Administration ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေး၊ Receptionist ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် မူဝါဒများချမှတ်ပေးရန်၊ နှင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာများအားထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရန်၊
•	မော်တော်ယာဉ် Ferry လမ်းကြောင်းများ၊ စီစဉ်မှုများအားအတည်ပြုပေးရန်နှင့် ဆီသုံးစွဲမှုများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအားကြီးကြပ်ပေးရန်၊
•	Financial ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ငွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာများ၊ ကြိုတင်ငွေထုတ်ယူခြင်း၊ ပြန်လည် ရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာများအားဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်မူဝါဒအရ နှင့်လုပ်ငန်းအနေအထား အရလိုအပ်ပါကသက် ဆိုင်ရာ Head of Department များနှင့်ညှိနှိုင်းစီစစ်ပြီးခွင့်ပြုပေးရန်၊
•	Cashier ၏လိုအပ်သောငွေကြေးထုတ်ပေးမှု-မူဝါဒ၊ နှင့်လိုအပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ် နည်းများသတ်မှတ်ပေးရန်၊
•	ကုမ္ပဏီ၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း Fix Asset များအားပုံမှန်စာရင်းကောက်ယူခြင်းကိစ္စများ ကိုက်ညီမှုမှန်ကန်မှုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ စသည်တို့အားဆောင်ရွက်ရန်၊
•	သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများအတွက် နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ Report ပုံစံများ၊ ချမှတ်ပေးခြင်း၊နှင့် တင်ပြလာမှုအပေါ်တွင် ဆန်းစစ်ခြင်း၊ လိုအပ်မှုများအတွက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	လစဉ်အရောင်း Target ပြည့်မှီမှုအခြေအနေများအား သက်ဆိုင်ရာ Sales & Marketing-HOD များနှင့်အတူပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး၊ လိုအပ်သည့် Action များချမှတ်ရန်၊
•	စက်ရုံပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရေးနှင့် အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှုများအားကြီး ကြပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်၊
•	အစိုးရဌာနဆိုင်ရအလုပ်သမား၊ လူမူဖူလုံရေး၊ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်းစသည်တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Head of Department တို့အားကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုပေးရန်၊
•	ISO စနစ်အရ လိုအပ်ချက်များနှင့် အခါအားလျော်စွာ အထက်တာဝန်ရှိသူ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
•	ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးGarment & Manufacturing Industry တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၇) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
•	MBA အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊
•	Office Management အပိုင်းကျွမ်းကျင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မိမိအောက်ဝန်ထမ်းများအားလမ်းညွှန် ပြသနိုင်ရမည်၊
•	အဖွဲ့အစည်း၏ တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရမည်၊
•	အရောင်းနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိရမည်၊
•	Englishအရေး၊ အဖတ်၊ အပြော၊ နားထောင်နိုင်မှုကောင်းမွန်ရမည်၊
Work location Building (189),Banyar Dala Road,infront of yuzana plaza,tarmwe,Yangon, Myanmar
Job details Job Category: Manufacturing jobs
Job Function: General Manager
Job posted: 13/12/2018
188 Days, Full time , Manufacturing
• good communication skill
• Willing to work under pressure and stress
•	Admin Manager အားတာဝန်ခံပြီး၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်၊ •	အဖွဲ့အစည်း၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ (Fixed Asset) များအားစစ်ဆေးပြီး၊ အတည်ပြု� ...
•	အသင်းအဖွဲ့အား ဦးဆောင်နိုင်ပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Garment Production Manager
•	Goods production drafting Plan production, Maintenance, to check quality levels to be able to properly manage. •	Improve the plant's operations, Adequate and secure peace efforts must be undertaken. •	Factory work rules and ensure safe must carefully monitor. •	Products produced in accordance with the prescribed standards and must try to be finished on time. Notwithstanding the waste products and must be able to manage to avoid lost. •	Relations Association and must be able to work together. Must bealong-term work with the com ...
Job ads in Maintainance and Production Jobs
Job ads in Maintainance and Production Jobs and in Yangon (Rangoon)
Marketing Assistant (Customer Service Staff)
•	Must be work hard and be honest •	Willing to work under pressure
•	Organization and worked with them for the long-term, Must be willing to work to stand up.
•	Able to support Business Management & Able to communicate with Foreign Company •	Organization and work with them for the long term .Must be willing to work to stand up
•	Must have good personality & communication skill •	Excellent in Financial Reporting to Management
•	Good communication skill •	Able to work under pressure
Job ads in Merchandising Jobs
Job ads in Merchandising Jobs and in Yangon (Rangoon)
•	နေရာဒေသမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
189 Days, Full time , Manufacturing
•	Able to go Government Office and Able to handle fix asset •	Able to use MS Excel (Computer &Internet& Email)
•	The Company designated Accounting System (Format effective in accordance with the Accounting Code Check whether the service. •	Check to ensure compliance in accordance with ISO policy.
• Draw, sketch and plan design for fashion apparel/accessories • Research fashion trend and similar designs • Create test/prototypes of design pieces • Collaborate with fabric manufacture for materials • Create matching or aligned pieces foracollection • Display design pieces at fashion and trade show present to report person • Market and sell fashion designs to retailers/customers • Advertise product and meet with distributors • Createaplan to manufacture design withateam or partnershi ...
Sale Assistant Manager
• Willing to work and perform the task in anyplace that assigned by Report Person
Market Research Staff
•	Need to data collection and analysis, Remain knowledgeable on products offered and discuss available options. •	Process POS (point of sale) purchases research.
•	MD အားတာဝန်ခံပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ •	ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံမှုပြုခြင်း၊ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ� ...
•	Physical stock taking , willing to work under pressure
•	Good communication
•	Conduct due diligence on client’s financial statements, suggest/correct any financial loopholes and make sure it is financially clean and ready to go public. •	Collaborate with foreign auditors and regenerate financial documents required by foreign stock exchange. •	Collaborate with foreign accounting firm to provide appropriate valuation for Myanmar companies using different valuation methods. •	Assist investment banker and client companies to write and report financial information including but not restricted to statements, not ...
•	Ensureasafe work environment for all employees as well as the utilization of safe work procedures. •	Ensure Production, Quality, Maintenance, Building Maintenance department personnel haveaclear understanding of their expectations and measures used to high performance. •	Ensure compliance with all Consolidate Management System, ISO and quality regulating agencies, as well as all Company Quality standards and procedures. •	Facilitate inter-department actions in conjunction with the Consolidated Management System which drive cont ...
•	Manager(Sales) အားတာဝန်ခံပြီး၊ လစဉ်အရောင်းစီမံချက်ပြည့်မီစေရန်အ တွက်မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများကိုစနစ်တကျကြီးကြပ်၍ လုပ်ငန်းအောင် မြင်မှုရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ရန်၊ •	နေ့စဉ်လုပ်ငန်းမစတင်မီတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရ� ...
•	The audit staff reports to the manager or the partner of the organization . •	Audit staff responsibilities include the preparation and maintenance of the financial reports,examining the profit and loss,deriving conclusion based on the reports and making the necessary recommendations. •	Evaluation and analysis of the financial data and verification of general ledger entries are some of the basic functions. •	Key Responsibilities of audit Staff •	To excel in the field of angling you must first be well acquit
General Manager Manufacturing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon CHO CHO PHYU Industrial & Manufacturing Co.,Ltd Manufacturing jobs Manufacturing jobs General Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Want to work in Lweje (Loije, Lwalgyai)? Find the best jobs in Myanmar at www.jobless.com.mm
Search best job in Ywathit at www.jobless.com.mm. Exclusive job portal in Myanmar. Apply online today!
Work in Yangon (Rangoon)(5020)
Work in Yangon Region(933)
Work in Mandalay Region(462)
Work in Mandalay City(81)
Work in Tanintharyi Region(77)
Work in Magway Region(67)
Work in Shan State(63)
Trust Venture Partners Co., Lt...(54)
George English Training Centre(41)
Barons & Fujikura EPC Co., Ltd...(30)
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.(28)
Sea Lion Co., Ltd.(28)
Tharaphu Soe Myint Company Lim...(28)
General Manager M (2)
Barons & Fujikura EPC Co., Ltd.
Goodwill Advisory Service
Manager for Healthcare
Hospitality and Retail Systems
Eternal Co,. Ltd.
Min Zar Ni Group of Companies
Pretty Paragon Textile Co., Ltd.
Greater Man Group of Companies
Yangon Region 152 Days
Yangon Region 227 Days
Finance & Admin Manager
Deputy Risk & Compliance Manager
Sale & Marketing Manager
Assistant Manager (Treasury Department)
Assistant Sales Admin Manager
Preschool/ Playgroup Principal (or) Programme Manager
Spare Parts Manager
Assistant Logistics Manager